HomeTurkeyMpaghara Marmara10 BalikesirBalikesir Kiziksa Bridge dị mma
07 / 01 / 2020 10 Balikesir, General, hyperlinks, Ụzọ Awara Awara, Mpaghara Marmara, Turkey
Akwa Kizilsa dị mma
Balikesir Kiziksa Bridge OK: Balikesir Metropolitan Mayor Yucel Yilmaz mezuru nkwa ya, Manyas County Manyas mere na Kocasay, Gönen-Kızıksa Road Bridge Bridge wuru.
Obodo Balıkesir na-aga n’ihu na-arụ ọrụ n'okporo ụzọ na àkwà mmiri ndị a na-eme n’oge niile n’akwụsịghị akwụsị. Balıkesir Obodo ukwu, nke na-ahụ mkpa maka ọrụ njem n'ụgbọ obodo, na-achọpụta ọrụ ga-eme ka njem nke ụmụ amaala bi n'ime ime obodo belata ma nyekwa ha ọrụ ntụrụndụ ọhụụ na nke ọgbara ọhụrụ. A na-arụzị ọrụ okporo ụzọ na àkwà mmiri na mpaghara niile, yana ndozi na ịrụzi ụzọ na àkwà mmiri ndị dị ugbu a n’ogbe Nnukwu Obodo na Manyas Kocasca County Manyas, Gönen-Kızıksa Road Bridge Bridge wuru.
N’afọ 1977, àkwà mmiri ahụ gbara afọ 43, nke nkwado ya na nkwado nke ndị mpaghara ahụ, bibiri obodo Balıkesir n’obodo mgbe ọ gwụchara ndụ bara uru na enweghị ike ịzaghachi mkpa ahụ. Àkwà mmiri ahụ dị n'okporo ụzọ ndị ọzọ na-eme ka oge dị mkpirikpi dị n'etiti Çanakkale-Balıkesir ma na-enyekwa ohere ịbanye na Manyas na agbata obi Kızıksa; E wughachiri ya na mita 240 na obosara nke 11 mita. Iji mee ka mmiri na-agafe agafe na-agafe agafe nke ọma maka ndị njem na ndị ji ụkwụ aga, a na-etinye ụzọ ụkwụ ogologo 1,5 mita n'akụkụ abụọ nke akwa ahụ gbasaa. A na-arụnye okporo ụzọ n'akụkụ mmiri ahụ, nke nwere ọdịdị ọhụụ karịa ka ọ dị na mbụ. Ọdọ mmiri ahụ, nke kwaturu ma rụkwaa ya, ma nwee oghere beepita dị mita 500 n'okporo ụzọ dị narị mita ise gụnyere ntinye na ọpụpụ.
Etọbere ntọala nke İzmir-Balikesir-Bandirma na ọrụ ịmepụta aha
E kwesịrị ịkụzi okporo ụzọ, okporo ụzọ okporo ígwè kwesịrị ịgbasa, ndị na-agagharị agagharị na-apụ
Yozgat Sivas ụgbọ oloko elu na-arụ ọrụ na-egbochi
Ọganihu Na-ahụ Maka Ọkụ Na-aga n'ihu
Nkwuputala nke obi ebere: Ụzọ ụgbọ mmiri okporo ụzọ na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ mmiri nke North North Section
Akụrụngwa ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ nke ọma
Ụgbọ njem-Sen na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ya n'enweghị ihe mgbochi na nzukọ ahụ
Uzo uzo Canakkale Balikesir
Ọdọ Mmiri Kizilsa